सम्झौता बमोजिम रु. ६ अर्ब किन दिएनन् दाताले ? – Himalaya TV
Home » समाचार » सम्झौता बमोजिम रु. ६ अर्ब किन दिएनन् दाताले ?
सम्झौता बमोजिम रु. ६ अर्ब किन दिएनन् दाताले ?
२ बैशाख २०७५, आईतवार ०८:४२
काठमाण्डौ २ बैशाख । विकास साझेदारहरूले नेपाललाई झुक्याएका छन् । स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी, जापानलगायत द्विपक्षीय विकास साझेदारहरूले नेपालको विकास निर्माणमा सहयोग गर्न ऋण तथा अनुदान सम्झौता गरे पनि प्रतिबद्धताअनुसार रकम प्रदान नगरेका हुन् ।
सम्झौता अवधिमा काम सुरु नगर्ने र परियोजना निर्माणकै क्रममा बजेटका लागि दाता गुहार्ने प्रवृत्तिका कारण पनि प्रतिबद्धता भएको रकम उपलब्ध नहुने अर्थविद् डा.शंकर शर्माले बताए । प्रतिबद्धता भएको रकम छिटो लिन नसके दातृ निकायको नीति–नियम पनि फेरिन्छ’, उनले भने, ‘सो कारणले पनि कतिपय परियोजनाको रकम नआउने गरेको हो ।’ कडा रूपमा प्रस्तुत भई प्रतिबद्धता गरेको रकम समयमा उपलब्ध गराउन ताकेता गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यो खबर अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।